Mudada uu maqnaanayo Lukaku oo shaaca laga qaaday… (Imisa kulan ayeey weyn doontaa Chelsea?) – Gool FM
(London) 22 Okt 2021. Warar ayaa waxay shaaca ka qaadeen mudada uu weeraryahanka Chelsea ee Romelu Lukaku ka maqnaan doono garoomada, kaddib dhaawicii ka soo gaaray kulankii kooxdiisa ay kula yeelatay naadiga Malmo tartanka Champions League.
Chelsea ayaa 4-0 ku garaacday kooxda reer Sweden, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada saddexaad wareega guruubyada ee Champions League-ga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Times” ee dalka England, Lukaku ayaa la filayaa inuu ka maqnaado garoomada ilaa iyo kulammada fasaxa caalamiga ah ee xiga, taas oo ah, ugu yaraan muddo bil ah.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in Chelsea ay sugayso tijaabooyinka caafimaad uu marayo Lukaku, laakiin weeraryahanka reer Belgium ayaa maqnaan doona laba ama saddex toddobaad, sidaas darteedna kooxda ayaa weyn doonta 5 kulan.
Romelu Lukaku ayaa tan iyo markii uu u dhaqaaqay Chelsea horaantii xagaagii hore isaga oo ka yimid Inter Milan, wuxuu ku dhaliyay 4 gool maaliyada Blues wuxuuna caawiyay gool, 11 kulan uu ciyaaray tartamada oo dhan.